I-SeaGem-Apart-Apart Surfers eqaqambileyo kunye neelwandle emnyango! - I-Airbnb
I-SeaGem-Apart-Apart Surfers eqaqambileyo kunye neelwandle emnyango!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAdrian
Indlu esandula ukulungiswa yale mihla eSurfers Paradise Budds Beach.
KULULA ukuhamba kwitram, iNetflix smart tv, iWiFi yasimahla, indawo yokupaka ekhuselekileyo yasimahla
Le ndawo yokuhlala yeholide yomgangatho ophantsi luhambo olufutshane ukuya kuyo yonke into i-Surfers Paradise enokubonelela. Ibekwe ngokugqibeleleyo kumgama wokuhamba ukuya elunxwemeni, umlambo omkhulu, iindawo zokutyela, iipaki kunye nekofu entle eBumbles Café. Ifakwe kweyona migangatho iphezulu yolonwabo. Izixhobo ze-BBQ / Pool. Kutheni uhlawula ngaphantsi, uya kuyithanda le ndawo! 3-5month ukuhlala ikhona!
Indawo esembindini, uhambo olufutshane kakhulu ukuya elunxwemeni, iivenkile, iitram, umlambo omkhulu, iindawo zokutyela, iikhefi kunye neeklabhu ezininzi kunye nemisebenzi! Wamkelekile kuLwandle lwaseBudds olukhethekileyo eSurfers Paradise.
Sinikezela ngeeNcwadana ezifundisayo ezingaphezulu kwama-200 kudonga olukhulu (ngaphambi nje kokungena kumgangatho ophantsi weflethi yakho yonke ) kuko konke onokukwenza eGold Coast ukwenza ukuhlala kwakho kube yeyona nto ilungileyo. Ukusuka kwiihambo zendalo, ulwandle ukuya kwezolonwabo, iipaki, imiboniso, iipaki zemixholo, iminyhadala, iindawo zokutyela, ubomi basebusuku, umtsalane wabakhenkethi ect.
Umsebenzi woqikelelo omawukwenze ngumbono, unolwazi kwaye uthatyathelwe wena.
4.86 · Izimvo eziyi-155
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi155
Uhambo olufutshane kakhulu lokuya eBumbles Café, iindawo zokutyela ezininzi zeSurfers Paradise, Beach, Main River, Markets, Q1, Iindawo zokuzonwabisa, Tram, 7Eleven, iicafes kunye nayo yonke into enokunikelwa ngabaSurfers. Relax ngasesantini, & nendawo yepikiniki. Ukukhwela isikhephe kwibhodi yokukhwela idumile kule ndawo nako.
Umbuki zindwendwe ngu- Adrian
Uqhagamshelwano olulula olukhoyo
Iimpendulo ezikhawulezayo, nayiphi na imibuzo nceda ungalibazisi ukuyibuza.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Surfers Paradise